🥇 ▷ Samsung Galaxy Note 10 Buug hadda ayaa la heli karaa (Ingiriis, ugu yaraan) ✅
Samsung Galaxy Note 10 Buug hadda ayaa la heli karaa (Ingiriis, ugu yaraan)
Miyaad sugaysaa midka cusub? Galaxy Note 10 ama note 10 Plus? Mise waxaad dooneysaa inaad wax walba si faahfaahsan u ogaato? Samsung ayaa horay u gelisay buugga-Ingiriisiga ee luqadda Ingiriiska ah. Nooca Nederlandays ayaa mar dhow lasocon doona.
Samsung Galaxy Note 10 Buug
Sidii caadiga ahayd, waxaad kuheleysaa Galaxy Note 10 (Plus) dhakhso kumana jirin boqolaal bog oo booqo ah. Waxaad ka heli doontaa qaab gaagaaban oo ku saabsan buugga (khadka tooska ah) ee aaladda aaladda. Intaa waxaa dheer, waad durba gali kartaa dokumentiga 258-bog ah.
Samsung waxay leedahay qoraalka 10-ka ah ee loo yaqaan ‘note 10’. Waqtiga la helayo nooca Ingiriisiga waa la heli karaa (PDF), laakiin nooca Nederlaanka weli lama hayo. Waxaa jira hal buug oo loogu talagalay labadaba Galaxy Note 10, Xusuusta 10 Plus iyo Xusuusta 10 oo leh xiriir 5G, marka waa inaad aqrisaa sidoo kale waxaad heysataa nooca koowaad. Dhamaan howlaha la muujiyey kuma jiraan qalabkaas, ka dib oo dhan (dabcan marwalba waa la muujiyaa).
Tallaabooyinka Hawada, Kordhinta Ciyaarta, AR Doodle iyo inbadan
Si kasta oo ay ahaataba, waxaan si lama filaan ah ula kulannay wax yaabo yaab leh oo yar waqtiga gaaban oo aan qodeyno feylka. Siyaabaha kala duwan ee aad u isticmaasho Furaha dhinaca – ah on-off-batoonka – waa la dhisi karaa AR Doodle, iyo kan cusub Waxqabadka S Pen Air ilaa Habka fiidiyowga tooska ah ee Live, wax walba si fiican ayaa loo sharxay. Intaa waxaa dheer, waxaan sidoo kale aragnaa kuwa cusub Ciyaarta xoojinta ciyaarta Gudub, kaas oo bixiya rajo ka badan kuwa ka sii waa weyn Qalabka Ciyaarta hada waxaa lagu heli karaa aaladaha sida Galaxy S10 (iyo kuwa kale oo badan) waa la heli karaa.
Dabcan waxaan sidoo kale ku dari karnaa xiriir ah luqadda Nederlandayska halkan Galaxy Note 10 buug sida ugu dhakhsaha badan markay diyaar noqoto.
Waxay qaadan doontaa toddobaad kale ilaa Galaxy Note 10 (Plus) ay dhab ahaantii ku jirto dukaamada Dutch. Dabcan waxaad horay uga ballansan kartay mid ka mid dukaanka Samsung HERE. Halkaas waxaad sidoo kale ka heli doontaa macluumaad dheeri ah oo ku saabsan dalabka horudhaca ah ee ganacsiga loo yaqaan ‘Galaxy Note 10’ ee horay-u-habeynta ganacsiga.